Home News Fahad Yasin Iyo Farmaajo oo Ku Heshiiyay Moshin Xilka Loga Qadayo Kheyre&Xildhibano...
Fahad Yasin Iyo Farmaajo oo Ku Heshiiyay Moshin Xilka Loga Qadayo Kheyre&Xildhibano Nayrobi Lagu Kulan Sinayo
Madaxweyne Farmajo iyo Fahad Yasiin ayaa guddi xildhibaano ah u xilsaareen sidii loo dedejin lahaa mooshin ka dhan ah RW Xasan Kheyre.
Xildhibaanadan ayaa waxaa loo daabulay magaalada Nayrobi si ay u sooo diyaariyaan in RW Xasan Cali Kheyre mooshinkiisa kalsoonida loogala noqon lahaa. Xildhibaanaadan ayaa muddo seddex maalmood ah ku kulmi doona Nayrobi si aay u soo diyaariyaan mooshikaas.
Agaasime ku xigeenka Madaxtooyada Cabdirasaq Shoole ayaa xildhibaanada u diyaariyey safarkan iyagoo sahaydooda safar horay loogu sii qaddimay. Shoole oo haysta amarka agaasimaha iyo raalli ka ahaanshaha Madaxweyne Farmaajo ayaa hawshaan fulinteeda u qalab qaatay.
Xildhibaanadaan oo u badan beesha uu Farmaajo ka soo jeedo ayaa go’aansaday in la sameeyo hannaan wajiga loogu dhaqo farmaajo isla markaana lagu eedeeyo dib u dhac weyn ee dalka ku yimid inuu ka dhashay shaqo xumida RW Xasan Cali Kheyre.
Waxaa la hubaa in marka barlamaanka uu soo noqdo la bilaabi doono mooshinka ka dhanka ah RW Xasan Cali Kheyre.
Ugu dambeyn waxaa la hubaa in dalka u halis ku jiro dhamaan hawlihiisana ay cakiran yihiin, lacag kastaa oo la helaa waxay ku baxdaa laaluush iyo hoteello looga bixiyo dad ujeedooyin gaar ah laga leeyahay, Mushaar joogto ah oo xildhinbaanada iyo suxufiyiinta qaarkood loo qoray, waana midda keentay in dalka uu markii ugu horreeysay uu galo halka ugu hooseeysa musuqmaasuqa dunida.